Ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta amahlathi aseMedithera e-coniferous | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Izinhlobo ezahlukene zemiphumela eziyibangelayo ukuguquka kwesimo sezulu Benza imvelo eminingi isengozini kakhulu futhi iqale ukonakala, njengaleyo yama-conifers.
Phakathi kwemiphumela eqapheleka kakhulu ukwanda kwesikhathi kanye nokuvama kwesomiso, izikhukhula, njll. Ukukhuphuka kwamazinga okushisa nesikhathi eside sesomiso kusongela amanye amahlathi ase-Iberia.
1 Ucwaningo ngothando lwama-conifers
2 Amahlathi aseMedithera asengozini enkulu
3 Ucwaningo lweCarbon
Ucwaningo ngothando lwama-conifers
Lolu cwaningo ngomphumela wesomiso emahlathini e-coniferous lwenziwe ngu iPablo de Olavide University (UPO), iSeville, iPyrenean Institute of Ecology (CSIC) kanye ne-University of Barcelona. Ukuze kuqedelwe lolu cwaningo, lo msebenzi ube nokusebenzisana kwamanyuvesi eComplutense aseMadrid naseColumbia (eU.SA) naseSwitzerland Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL). Ngaphezu kwalokho, umsebenzi ushicilelwe ephephabhukwini i-Global Change Biology.
Umholi womsebenzi ubelokhu ekhona URaúl Sánchez Salguero, umcwaningi we-postdoctoral e-UPO nase-IPE-CSIC. Ucwaningo selugxile engcupheni esongela kakhulu amahlathi eningizimu eningizimu. Ukwanda kwamazinga okushisa okubangelwa ukuguquguquka kwesimo sezulu nobude besikhathi kanye nesilinganiso sesomiso kusongela izinhlobo ezinjenge uphayini waseScotsUPinus sylvestris), isikhunta (U-Abies alba) nophayini omnyama (UPinus uncinata).
Ukuze sikwazi ukubikezela imithelela kanye nezinguquko ezenzeka kulezi zinhlobo, sisebenze ngezinhlobo zezibalo ezisuselwa kumthelela wesimo sezulu ebunzimeni bamasongo wokukhula waminyaka yonke afundwa yi-dendrochronology.
Amahlathi aseMedithera asengozini enkulu
Ngokucwaninga kwalezi zindandatho zokukhula kube lula ukuhlola ukuba sengozini kwamahlathi kuma-gradients abanzi wesimo sezulu ne-biogeographic. Ukulinganisa ukuba sengozini kwezihlahla, ukujwayela okuye kwabonwa ngamahlathi ekushintsheni kwesimo sezulu okubonwe phakathi nengxenye yesibili yekhulu lama-XNUMX kuye kwacatshangelwa. Bese beqagela ukuvela kwesikhashana kokukhula kwala mahlathi ngaphansi kwezimo ezahlukahlukene zezulu, ezitholwe ngokususelwa kuzimo zezenhlalo nezomnotho ezilinganisela ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa phakathi nekhulu lama-XNUMX.
Abaphenyi baphethe ngokuthi amahlathi aseMedithera asengozini enkulu ekuhlaselweni yisimo sezulu, ikakhulukazi isomiso. Yize izimpendulo zale mvelo zinamazinga amakhulu okungaqiniseki ngaphambi kwezimo zezulu ezibikezelwe ngekusasa uma izimo zokukhishwa kwegesi ekhipha ukushisa ziqhubeka kanjena.
Kulezi zinhlelo zemvelo kunezinhlobo ezinokuthile okungaphezu kokuthi ukuzivumelanisa nezimo nokuqina kwepulasitiki ekuguqukeni kwezinga lokushisa nokumelana nesomiso.
“Ukuhlola nokuchaza imingcele ebonakala kalula yokuba sengozini ekuguqukeni kwesimo sezulu kubalulekile ukuthola izindlela zokuphathwa kwamahlathi ezingaphazamisa le miphumela, ikakhulukazi emikhawulweni esatshalaliswa kakhulu, kanye nokuhlonza labo bantu ababekezelela ukuguquka kwesimo sezulu okusebenza setha izindlela zokongiwa kwemvelo ”kubonise uRaúl Sánchez-Salguero noJuan Linares.
Kubalulekile ukuhlola izinguquko kumjikelezo wekhabhoni ezinhlotsheni zezinto eziphilayo zaseMeditheranjengoba amahlathi afaka inani elikhulu lesikhutha ku-photosynthesis. Le CO2 igcinwa amashumi eminyaka ezinkuni futhi ikhishwa lapho kugawulwa izihlahla.
Ngaphezu kwalokho, okunye okufanele kubhekwe ukuthi, yize izihlahla zingagawulwa ukuze kukhishwe izinkuni, kumele kubhekwe ukuthi uma lezi zihlahla zingasindi emiphumeleni yokuguquka kwesimo sezulu, nazo ikhabhoni enqwabelene ibuyiselwa emuva emoyeni.
Ababhali baphetha ngokuthi ukwanda komhlaba wonke emazingeni okushisa nezikhathi ezomile kuzonciphisa ukukhula futhi kunciphise inkathi efanele yokukhula phakathi nengxenye yesibili yekhulu lama-XNUMX, engadala ukubola kwezimo futhi inyuse namanani okufa kwezihlahla.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu kuthinta amahlathi ase-Mediterranean coniferous